Rivodoza Roanu: Andro Ratsy Nananontanona, Sy Ny Valinkafatra “Fahombiazana” Avy Amin’i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2016 14:12 GMT
Nisedra làlana lavitra i Bangladesh mikasika ny fiomanana hiatrehana ireo loza mahatsiravina hatramin'ny taona 1970, fony olona 500.000 no maty nandritra ny rivodoza Bhola. Nanangana fialofana maherin'ny 2.500 tamin'ireo toerana natao avo toerana ny firenena, izay nampiasaina ho sady sekoly no ivontoeran'ny fiarahamonina rehefa tsara ny toetrandro. Namokatra rafitra fampandrenesana mialoha nasiana fanatsaràna, ary nomena fiofanana ireo mpirotsaka an-tsitrapo hanampy amin'ny famindràna ny olona ho any amin'ireo toerana fialofana.
Ny 14 May teo, nisy faritra manana tsindry ambany niforona teo amin'ny elodranon'i Bengale ary nihamafy lasa ho faritr'andro ratsy tropikaly rehefa tao amin'ny morontsiraka atsinanan'i Sri Lanka. Hatramin'io fotoana io, manakaiky ny antsasaky ny tapitrisa ireo olona nafindra toerana ary 82 ireo olona maty tao Sri Lanka vokatry ny orana be loatra sy ny fihotsahan'ny tany naterak'ilay andro ratsy, izay nanjary lasa rivodoza tropikaly Roanu tamin'ny 19 May. i Maldiva no nanome ny anarana; midika hoe “kiram-boanio” ny “Roanu” ao Maldiva (Dhivehi).
Rivodoza Roanu mikapoka ireo morontsiraka https://t.co/ce5nNbhy5u#CycloneROANU #Cyclones pic.twitter.com/IB7MsT36b0
Tsara fiomanana kokoa i Bangladesh tamin'ity indray mitoraka ity. Olona manodidina ny 2 tapitrisa no nafindra toerana mialohan'ny nitondran'i Roanu rivotra mahery sy orambe ho an'ireo vondrom-piarahamonina tany amin'ny morontsirak'i Bangladesh, 24 farafahakeliny ireo olona maty ary olona manodidina ny antsasaka tapitrisa no nafindra toerana.
Ambany ny tahan'ny maty, raha ampitahainao amin'ilay rivodoza Sidr tamin'ny taona 2007 izay nahatratra 3.447 ny isan'ireo maty tamin'izany ary niteraka fahasimbana an-tapitrisany dolara. Tamin'ity indray mitoraka ity, niaraka niasa ny minisitra misahana ny fiatrehana ny loza, ny mpamono afo ary ny sampan-draharaha mpamantatra toetrandro mba hitazonana ho amin'ny ambany indrindra ny voka-dratsin'i Roanu. Na izany aza, maro ireo trano sy làlana no simba, mamela ireo fianakaviana ho tsy manan-kialofana mandritra ny vanim-potoan'ny orana efa manakaiky.
Mamindra toerana olona 500.000 i #Bangladesh mialohan'ny Rivodoza #Roanu, mba hisorohana famoizana ain'olona maro https://t.co/7VQ9jiori7
Efa 6 sahady no maty & an-tapitrisany no nafindra toerana noho ny fikapohan'ny rivodoza Roanu an'i Bangladesh. Miakatra ny taham-pahafatesana. #PrayForBangladesh pic.twitter.com/46fBpdVxBp
Antsipirihany maro mikasika ny vokatry ny rivodoza #Roanu tao Banshkhali, distrika voa mafy indrindra, avy amin'ny tarika @UNDP_BD izay eny an-toerana pic.twitter.com/5vCmVX7JoT
Namariparitra tao amin'ny Facebook mikasika ny fiovan-javatra nisy tao amin'ny fireneny i Naser Imran Hossain Bangadeshi mpila ravinahitra:
Na izany aza, tsy mitovy ny eritreritry ny rehetra. Kaberi Gayen nampitandrina nanohitra ny fanamaivanana mikasika ny isan'ireo nindaosin'ny fahafatesana vokatr'i Roanu:
Tsy tapitra akory ny fizotry ny fanatsarana ny fiomanana hiatrehana ireo loza ao Bangladesh, saingy mizotra mankamin'ny làlana tsaratsara kokoa, hoy i Khurshid Alam teo amin'ny bilaogin'ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fampandrosoana:
3 andro izayBangladesh